WunYan – Page 314
မန္တလေးမြို့ကို သိက္ခာချ နေသော မန္တလေး တောင်မှ ဓာတ်ပုံဆရာ
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ၃ယောက်ကို ယနေ့ မန္တလေးတောင် ကိုအလည်လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ် ခြေထောက်နာ နေလို့တောင်ထိပ်ကို လိုက်မပို့ဖြစ်ခဲ့ပါ. တောင်တက်ဂိတ် မှာမေးတဲ ဓာတ်ပုံ ဆရာ ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်. .မိတ်ဆွေ တွေကိုလည်း အမှတ်တရဖြစ်အောင် ပုံသေး ၅ ပုံလောက်ဘဲရိုက်ပါ . . .တစ်ပုံကို ဆိုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး ၇၀၀ /၁၅၀၀ လောက်ဘဲရှိတယ်ပြောပြီး ဓာတ်ပုံ ဆရာ ကို…
မနေ့က မိတဲ့ လက်နက်ကိစ္စမှာ သုံးသပ်မိတာရှိတယ်
Posted on October 16, 2017 by whuk-46651
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ခရိုနီကြီးဘဝကနေလွှတ်တော် Project တွေ ရလာကာဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူရဲ့သား..၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်လောင်းအဖြစ်ပြိုင်ခဲ့သူသူ့ဆီက လက်နက်အတိုတွေမိတယ်။ မိတာက..ထားပါ..မီဒီယာတွေကို တာဝန်ရှိတဲ့ ရဲမှူးပြောသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆောင်တယ်။ အရပ်သားတစ်ယောက် သေနတ်တွေနဲ့လေယာဉ်ပေါ်တက်တာကို..ကိုယ်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့လို့ ဖြေတဲ့ ရဲတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အဖြေမျိုးနိုင်ငံတကာမှာမရှိဘူးဆိုတာတော့ သေချာတယ်။စိတ်ဝင်စားတာက ပုံတွေထဲက..သူ့တံဆိပ်တွေ National Security Counsil အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆိုတဲ ဆင်ဘောလုံးကန်နေတဲ့ နံပတ်စဉ်တပ်ထားတဲ့တံဆိပ်မှာSpecial Police အထူးရဲအဖွဲ့ဆိုပီး နံပတ် ၁၂ တပ်ထားတယ်။နံပတ် ၁၂ ဆိုရင်…ဒါဟာ…
စပါးလင်ဟာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီအပင်ဟာ အမွှေးအကြိုင် တစ်မျိုးဖြစ်ရုံသာမက ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပေါင်းခံအဆီထုတ်သုံးပါက ရောဂါအတော်များများအတွက် ဆေးတစ်လက်ဖြစ်ပါ တယ်။ စပါးလင်မှာ ဗီတာမင် အေ၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဖောလိ အက်ဆစ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဇင့်၊ ကော်ပါး၊ သံဓါတ်၊ ဖော့စပရတ်၊ ကယ်လစီယမ်၊ မန်ဂနိဓါတ်နှင့် အခြားသတ္တုဓါတ်အနည်းငယ် ပါဝင်ပါတယ်။ မှီဝဲသုံးစွဲပါက ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ စိတ်ညှိးနွမ်းနေခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ၊…
မောင်တောမြို့နယ်၊ တောင်ပြိုဝဲမြို့၊ မဲဒီကျေးရွာနှင့် လက်ဖွဲ့ကျကျေးရွာအနီး မီးရှို့ရန်လာရောက်သည့် ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ ဖမ်းဆီးရမိ နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ – ၁၆ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ တောင်ပြိုဝဲမြို့၊ မဲဒီကျေးရွာရှိ နေအိမ်များအား ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးမည်ဟုသတင်းအရ အဆိုပါကျေးရွာအနီး လုံခြုံရေးဆောင်ရွက် စဉ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီခွဲ ခန့်တွင်…
တန်ဖိုးကြီးလှတဲ့ တပင်တိုင်မြနန်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေပါ
တပင်တိုင်မြနန်း ရဲ့ အထွေထွေဆေးဖက်ဝင်ပုံ (၁) အရွက်၊ ပင်စည် နှင့် ဥများကို စားဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ လိမ်းဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (၂) တပင်တိုင်မြနန်းပင် အဖြူ-အနီ-အနက်ရောင် အမျိူးအစားအားလုံးရဲ့ အမြစ်ဥတွေကမြစ်ပွားနာအပါအ၀င် အဖု၊ အကျိတ်၊ အနာများ အား သွေးလိမ်းရုံဖြင့်ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။(သို့ မဟုတ်) အဖု၊ အကျိတ်၊ အနာများပေါ်တွင် အရွက်ကို အစိမ်းလိုက်ချေ၍ အုံကပ်ထား ခြင်းဖြင့်လည်း သက်သာပျောက်ကင်း စေပါတယ်။…
၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်အထိ ဟောစာတမ်း
Posted on October 16, 2017 October 16, 2017 by whuk-46651
အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ သွေးထွက်အောင်မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ …. ။ မိတ်ဆွေတို့၏ကောင်းကျိုးများကို အစဉ်လိုလားသော မင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) မိုးအကုန်ဆောင်းအကူး ဆောင်းဦးပေါက်ကာလ၏ အေးချမ်းသာယာပြီး ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာကောင်းလှသော အောက်တိုဘာလ၏ နေ့ရက်များ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဆရာကောင်းတွေရဲ့ အကူအညီကောင်းတွေပေါ်လာမယ် ။ နိုင်ငံခြားနဲပက်သက်လို့အဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။မြေ၊အမွေ၊ဖုန်း၊အထည်၊ထီး၊ဖိနပ်၊ဓါတ်ပုံ၊လျှပ်စစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ် ။ ဘာမှန်းမသိပဲ အလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်။ တအားပင်ပန်းမယ်…
ဂဠုန်ဦးစော၏ နိူင်ငံတော်လုပ်ကြံမူနောက်ကွယ်က အချစ်ဇာတ်လမ်း
အမိူးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ခူပ်အောင်ဆန်းနင့်အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလုပ်ကြံခဲ့ကြသောဂဠုန်ဦးစောနင့် လူသတ်တရားခံများကို ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်ရန့်က1947 စက်တင်ဘာ20 ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးရန်အထူးခုံရုံးကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ လူသတ်တရားခံများဖြစ်သော( ဂဠုန်ဦးစော ရန်ကြီးအောင် မောင်စိုး သက်နင်း မောင်နီ ခင်မောင်ရင် သုခ စိန်ကြီး ဘညွန့်တိုကို အပြစ်ဒဏ်အသီးအသီးချမှတ်ခဲ့သည်။လုပ်ကြံမူတွင်ပါဝင်ခဲ့သောဘညွန်သည် အစိုးရသက်သေဖြစ်သွားသောကြောင့် ပြစ်ဒဏ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရခဲ့သည်။ထိုနောက် 1947 ဒီဇင်ဘာ30 ရက်နေ့မှ7ရက် အတွင်းအယူခံဝင် နိူင်ကြောင်း အထူးခုံရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။တရားခံများမှာအယူခံအသီးသီး ဝင်ခဲ့ကြသော်လည်း တရားလွတ်တော်ခူပ်ကအယူခံများကို…
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ။ (၁၆-၁၀-၂၀၁၇)ရက် နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်KALPANA_1ဂြိုဟ်တုမှ တိုင်းတာပေးချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် နှင့် ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ် နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဒေသတွေ မှာ တိမ်အသင့်အတင့် မှ တိမ်ထူထပ် နေပြီး၊ ကျန်ဒေသတွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်း နေပါ…
ကျွန်းစုမြို့နယ် ကံမော်ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မယ်အနောက် ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သူ ကိုရိုက်ခေါင်း(ခ)ကိုထက်နိုင်ဝင်းသည် ယနေ့မနက် ပင်လယ်ထဲပိုက်ဆွဲရာမှရရှိလာသောခရုအုန်းအား ဟင်းချက်ရန် ခွဲထုတ်ရာမှာပုံပါအတိုင်း ရွှေရောင်သန်းလျက်ရှိသော အမြုတေတစ်လုံးကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ လူသိနည်းသည့် ရတနာ တစ်ပါး သို့မဟုတ် ခရုအုန်း အမြုတေ။ ပင်လယ် ငါးဖမ်းလှေများတွင် ဖမ်းယူ ရရှိသည့် ခရုအုန်း(ခေါ်) အုန်းခရု တစ်မျိုးအတွင်းမှ တစ်ခါတစ်ရံ ရရှိတတ်သည့် ခရုအုန်း အမြုတေသည် တန်ဖိုးကြီးမားသည် ရတနာတစ်ပါး ဖြစ်သည်ကိုကား သိသူနည်း…
တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး ၂ လုံး ၁ လစားပြီးနောက် အံ့သြသွားမည့် အပြောင်းအလဲ
တစ်လောကလုံးက လူသားများအားလုံးက သစ်သီးစားသုံးခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာ လက်ခံထားကြပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အ၀လွန်ရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် ရောဂါအဖြစ်များတဲ့ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အများဆုံးစားသုံးတဲ့အသီးဟာ ဘာအသီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီး နှင့် ဖရဲသီးများလား။ မဟုတ်ပါဘူး ဒီအသီးတွေ ထဲကတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲ ငှက်ပျောသီးဖြစ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကတော့ ကျွန်ပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှ ရောဂါအားလုံးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တာ တော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကို ငှက်ပျောသီး ၂ လုံးစားသုံးခြင်းဟာ…
Previous 1 … 313 314 315 … 402 Next